Samachar Batika || News from Nepal » बिहीबारको दिन भुलेर पनी गर्न नहुने यी पाँच काम
बिहीबारको दिन भुलेर पनी गर्न नहुने यी पाँच काम
बिहीबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ
बिहीबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने विश्वास गरिन्छ । तर बिहीबार केही काम गर्न भने नि’षेध गरिएको छ ।१. कपाल नुहाउनु हूँदैन, २. रौं का’ट्नु हुँदैन, ३. दारी का’ट्ने वा नङ का’ट्ने, ४. भारी कपडा धुनु र फोहोर गर्नु हुँदैन, ५. लक्ष्मीको मात्र पुजा पनि गर्नु राम्रो मानिदैन ।
शास्त्रमा बिहीबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले बिहीबार कपाल नुहाउनु अ’शुभ मानिन्छ ।
महिलाको जन्मकुण्डलीमा वृहस्पति पतिकोरुपमा रहने हुँदा यो दिन कपाल नुहाउनु नराम्रो मानिन्छ । बिहीबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अ’शुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबारको दिन कपाल वा दारी काट्नु अ’शुभ मानिएको छ । वृहस्पतिलाई जीवन अर्थात जीवन भनिएको छ । बिहीबार रौं का’ट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने भनिन्छ । यसो गर्दा शिरमा अ’सर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार नङ काट्नु र दारी का’ट्नु अ’शुभ मानिन्छ । यस्ता कार्य बिहीबार गर्दा जागिरमा समस्या हुने र पदोनन्ती हुनुको साटो घटुवा हुने समेत सम्भावना हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार कपाल धुने, कपडा सफा गर्ने, दारी का’ट्ने, रौ का’ट्ने, फेशियल, नङ का’ट्ने काम कहिले पनि नगर्नुस् । त्यस्तै घरको सरसफाइ माकुराको जालो हटाउने काम पनि बिहीबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
बिहीबारको दिन भारी कपडा धुनु राम्रो मानिँदैन । बिहीबारको दिन ठूला ठूला कपडा धुँदा अ’शुभ हुने मानिन्छ । बिहीबार घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्नु पनि नराम्रो मानिन्छ । बिहीबारमा घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्दा अ’शुभ हुने मानिन्छ । घरको सरसफाइ सकेसम्म बिहीबार नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
बिहीबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिनमा के के गर्न हुदैन भन्ने बारेमा हामीले माथी जामकारी दिईसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०१:५४